एन-९५ मास्क धोएर फेरि प्रयोग : कति सुरक्षित? – Health Post Nepal
एन-९५ मास्क धोएर फेरि प्रयोग : कति सुरक्षित?
२०७७ मंसिर ९ गते १६:१२
कोरोना भाइरस पुष्टि भएको एक वर्ष पुगिसक्यो। विश्वभर कोरोनाको त्रास अझै उस्तै छ। हालसम्म पाँच करोड ९५ लाखभन्दा बढी मानिस संक्रमित भइसकेका छन्। १४ लाखभन्दा धेरै मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन्।
हाल कोरोनाबाट बच्न थुप्रै मानिसहरूले मास्कको प्रयोग गरिरहेका छन्। र, त्यसमा पनि एन ९५ मास्कलाई बढी सुरक्षित मानिन्छ। केही मानिसले यसलाई धोएर पनि प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्।
के यो धोएर प्रयोग गर्नु सुरक्षित मानिन्छ? यस्तो भन्छन् भारतस्थित लेडी हार्डिग कलेजका स्वास्थ्य विषेशज्ञ डा. घनश्याम पाङ्‌ग्टेय:
एन-९५ मास्कलाई चार पटकसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर, त्यसका लागि मानिससँग तीन/चार मास्क हुन जरुरी हुन्छ। ताकि प्रत्यक मास्कलाई तेस्रो वा चौथो दिनमा प्रयोग गर्न पाइयोस्। एन-९५ मास्कलाई धोएर प्रयोग गर्न मिल्दैन।
धुँदा मास्कमा भाइरसलाई रोक्ने क्षेमता कमजोर हुन पुग्छ। कतिपय अवस्थामा त धोएको मास्कमा भाइरस रोक्ने क्षेमता नै खत्तम हुन पुग्छ।
डाक्टर, स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस बल र अन्य फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने व्यक्तिले त एन-९५ मास्कको प्रयोग नै गर्नु हुँदैन। किनकी उनीहरू संक्रमित व्यक्तिका सिधै सम्पर्कमा आइरहेका हुन्छन्। उनीहरूका लागि सर्जिकल मास्क नै उपयुक्त हुन्छ।
यतिबेला विश्वभर एक सयभन्दा बढी कोरोना भ्याक्सिन परीक्षणको अवस्थामा छन्। यी मध्ये १०-१२ भ्याक्सीन परीक्षणको अन्तिम चरणमा छन्। अक्सफोर्डको भ्याक्सिनले तेस्रो फेजको परीक्षणमा ७० देखि ९० प्रतिशतसम्म सफलता प्राप्त गरेको दावी गर्दै आएको छ।
यसका अलावा फाइजर, माडेर्नालगायतका भ्याक्सिनले पनि ९० देखि ९५ प्रतिशतसम्म सफलता प्राप्त गरेको बताइएको छ।
मानिसले पछिल्ला दिनमा स्वास्थ्य मापदण्ड भुल्दै गएका छन्। जसले गर्दा अवस्था चिन्ताजनक हुन पुगेको छ। यतिबेला हिन्दुधर्मावलम्बीका चाडपर्वहरू धेरै भएकाले पनि मानिसको आवागमन बढेको छ। जसले गर्दा नेपाल भारत जस्ता देशमा कोरोना संक्रमण तिब्र गतिमा फैलिरहेको र अझै फैलिने सम्भावना छ।
मानिसले अझै सावधानी नअपनाए अवस्था थप भयावह हुनेछ। र, अस्पतालमा संक्रमितका लागि बेल नै अभाव हुने अवस्था आउन सक्छ।
चिसो बढ्दो छ। यस्तो बेला मानिसले गरम खानेकुरा खानु पर्छ। तातो पानी पिउनुपर्छ। सकभर घरको मात्रै खानेकुरा खानुपर्छ। जति कम मानिसको सम्पर्कमा आउन सकियो उत्ति नै कोरोनाको जोखिम पनि कम हुन्छ।